Ahịa Ahịa Agbanwe Agbanwe - Ọ bụghị Iwu 40/40/20 | Martech Zone
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 26, 2007 Monday, August 27, 2007 Douglas Karr
M na-ahazi akwụkwọ mpempe akwụkwọ m n'ụtụtụ a ma tụlee akwụkwọ ochie Direct Marketing nke m nwere, Direct Mail site na Ọnụ Ọgụgụ. Onye biputara ya na ulo oru United States Post Office ma buru ezigbo ntuziaka. Mgbe m na-eme akwụkwọ ozi, agara m Postmaster dị na mpaghara wee nweta igbe ha. Mgbe anyị zutere onye ahịa nke na-emetụbeghị Direct Mail na mbụ, ọ bụ nnukwu akụ na ụba ka ha mụta uru dị na ngwa ahịa ngwa ngwa.
N’ịtụleghachi akwụkwọ a taa, achọpụtara m etu ihe gbanwere n’ime afọ iri gara aga - ọbụnadị n’ime afọ ole na ole gara aga.
Ozizi ochie nke ịzụ ahịa ahịa bụ Iwu 40/40/20:
40% nke nsonaazụ ahụ bụ n'ihi ndepụta ị zigara. Nke a nwere ike ịbụ ndepụta nke ị zụrụ maka ịtụ anya ma ọ bụ nwee ike ịnwe ndepụta ndị ahịa gị dị ugbu a.
40% nke nsonaazụ bụ n'ihi onyinye gị. Agwala m agwa ndị ahịa na oge ị nwere na mkpọsa ozi na-adọta atụmanya ahụ ruru ọnụọgụ nke usoro dị n'etiti igbe akwụkwọ ozi na ahịhịa.
20% nke nsonaazụ ahụ bụ n'ihi ihe okike gị. N’izu ụka a ka m natara mpempe akwụkwọ ozi sitere n’aka onye na-ewu ụlọ ọhụrụ. N'ime ya bụ isi ihe iji nwalee n'ụlọ obibi ihe nlereanya. Ọ bụrụ na igodo ahụ dabara, ị meriri n'ụlọ ahụ. Nke ahụ bụ onyinye na-atọ ụtọ nke nwere ike mee ka m chụga obodo kacha nso - ihe okike.
Direct Mail na Telemarketing jiri iwu isi mkpịsị aka maka afọ iri abụọ gara aga. Ekwela oku ndekọ na omume CAN-SPAM egosila na ike agwụla ndị na-eri ahịa ma ọ gaghị anabata arịrịọ na-enweghị ikike. N'ezie, ekwenyere m na enweghị ikike ga-akpata mmetụta na-adịghị mma na mkpọsa gị ma nwee ike ịbawanye mkpa Ndepụta.
Okwu Ọnụ Ahịa bụ akụkụ dị mkpa nke ahịa ụlọ ọrụ ọ bụla - mana ọ bụghị nke ngalaba ahịa, ọ bụ nke ndị ahịa. Ọ bụrụ na ịnweghị ike iwepụta nkwa gị, ndị mmadụ ga-anụ maka ya ngwa ngwa karịa oge ọ na-ewe iji mezuo mkpọsa gị. Okwu ọnụ ahịa ga-emetụta mgbasa ozi ahịa ọ bụla. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnapụta, ekwela nkwa.
Ọ naghị asọpụrụ ire dị mfe, mana m kwenyere na iwu ọhụrụ bụ Iwu 5-2-2-1
50% nsonaazụ ya bụ n'ihi ndepụta ị zigara ma kachasị mkpa na ndepụta ahụ bụ ikike ị ga-agwa ha nakwa otu esi debanye aha ya.
20% nke nsonaazụ bụ n'ihi ozi ahụ. Icheta ozi ndị na-ege ntị bụ ihe dị mkpa. Ozi ziri ezi nye ndị na-ege ntị kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị bụ naanị ụzọ iji hụ na ị nwere ike ijikwa ikike ma nweta nsonaazụ ịchọrọ maka mbọ ahịa gị.
20% nke nsonaazụ bụ n'ihi na ọdịda. Maka ahia email, nke a bụ peeji nke ọdịda na ọrụ na-esote ma gbue ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ n’anyị enweghị ike iwepụta nkwa ndị ị zụpụtara n’ahịa, mgbe ahụ okwu ọnụ ga-eme ka ozi ahụ pụta ọsọ ọsọ karịa ka ịnwere ike ịmachi ya. Gha “tọgbọrọ” onye ahịa ahụ nke ọma ka ị wee nwee ọganiihu n’ọdịnihu.
10% ka bu ihe okike nke mgbasa ozi ahia gi. I nwere ike iche na m na-ekwu na creativity adịghị mkpa karịa n'oge gara aga - nke ahụ abụghị eziokwu - ikike, ozi, na ọdịda dị mkpa karịa ka ha dịbu.
Ọchịchị 40/40/20 ochie nke azụmaahịa anaghị ewere ikike, ịre ahịa okwu, ma ọ bụ igbu ngwaahịa na ọrụ gị. Echere m na 5-2-2-1 Iwu eme!
Ọgọstụ 26, 2007 na 9:36 ehihie
Ekwesịrị m ikwu na njikọ mgbasa ozi gị dị ka ahịrị mbụ nke blọọgụ ọ bụla na-eme ka ọ sie ike ikpebi ihe m chọrọ ịgụ na FeedDemon. Ebe ọ bụ na anaghị m enweta paragraf nke mbụ, naanị m na-enweta mgbasa ozi ahụ, ana m agụkarị ndepụta niile dị ka agụ na-abanyeghị na ya.
Ọ bụ ezie na m ghọtara mkpa ọ dị ịbawanye ikpughe, m ga-eji obiọma na-atụ aro na ikekwe itinye mgbasa ozi ederede n'ime ahụ nke nbipute kama dị ka ahịrị nke mbụ ga-eme ka ọdịnaya gị dịkwuo mma ma mee ka ndị mmadụ dị ka m jiri amamihe kpebie ma ha na-elele gị. ikesa bụ ezi echiche ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ọgọstụ 26, 2007 na 9:54 ehihie
Tim, nke ahụ bụ ezigbo nzaghachi. Achọpụtara m na onwe m mgbe m biputere ya ma chefuo ya… n'abalị a ka m kwagara ya na ala nke nri. Daalụ maka iwepụta oge iji mee ka m mara. Enwere m ekele maka ya!
Ọgọstụ 26, 2007 na 10:17 ehihie
Doug, daalụ maka ịbụ ma nghọta na anabata.